Mee okooko osisi wax | Crafts Na
Mee okooko osisi wax
Theresa Aseguin | | Crafts
N'etiti ihe ndị na-adọrọ mmasị ma na-atọ ụtọ ihe ịchọ mma dị mma, enwere okooko osisi wax. Ọ bụ ihe dị ezigbo mma iji mee ka okooko osisi dị ogologo oge, nke ọ dị nwute na-akpọnwụ ngwa ngwa, ọ bụ ezie na usoro aghụghọ ọzọ na-atọ ụtọ bụ okooko osisi a mịrị amị.
Site n'iji wax okooko osisi Ha mara mma nke ukwuu, na-adịgide adịgide ma dịkwa mma, enwere ike iji ya dobe tebụl n'ụlọ, ịme ihe ịchọ mma ma ọ bụ ọrụ aka, ma ọ bụ ikekwe inye enyi ya n'oge pụrụ iche. Usoro a di nfe, uzo ole na ole zuru ezu iji nweta okooko osisi zuru oke ma di nma.
Ihe eji eme okooko osisi wax bụ paraffin na stearin. Ihe mbụ ị ga-eme bụ gbazee iberibe ihe ndị dị na mmiri ịsa ahụ site na ịtinye glycerol iji gbochie ya ịgbaji mgbe ọ kpọrọ nkụ. Mgbe waks ahụ gbazee, wepụ ya na ọkụ ma hapụ ka ọ dị jụụ maka nkeji ole na ole. Kpachara anya ka ị ghara ime ka obi gị sie ike.
Were okooko osisi, dị ka anụ ahụ dị ka o kwere mee, na-ewere ụdị dị iche iche dị ka gerberas, roses, carnations, daisies, ma tinye ha na wax na n'akụkụ nke corolla. Mee mmegharị agagharị ka wax ahụ rute n'akụkụ niile nke corolla wee debe ya ala.
Mgbe okooko osisi kpamkpam akọrọ ị nwekwara ike ịmepụta bouquet nke okooko osisi nke agba. Zuru okè dị ka ụlọ mma.
Ozi ndị ọzọ - akwụkwọ ifuru
Isi mmalite - gbawa.it
Pathzọ zuru ezu na edemede: Crafts Na » Crafts » Mee okooko osisi wax
Edith Arvizu Caballero dijo
Ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị nwere ike itinye foto nke usoro ahụ. Daalụ maka ịkekọrịta!!
Zaghachi Edith Arvizu Caballero
Otu esi eme ka ọla aka na eriri
Uwe mara mma